नेताको गफले गरीबको चुलो बलेन– श्रमिक पाल्न नसक्ने देशले खर्चिला नेता पाल्ने ? – ThikThak News
नेताको गफले गरीबको चुलो बलेन– श्रमिक पाल्न नसक्ने देशले खर्चिला नेता पाल्ने ?
हामि नेपालीहरुको इतिहास गर्विलो छ तेसैले होला हामि बर्तमान भन्दा पनि इतिहास सम्झेरै बढी गर्व गर्दै बस्ने गरिरहेका छौ। सायद हाम्रो इतिहास नै गौरभमय भएर पनि होला इतिहासको सकारात्मक पक्षलाई वर्तमानले उछिन्न सकेन । देश बिकास हुने बाटो जाने काम सुस्त छ , भ्रस्टाचार भने उच्च गतिमा भैरहेको छ। नेता नै नेता भएको देशमा , गरिब जनताको घर चल्न अति मुस्किल अबस्था छ। नेताहरुको गफले गरीबको चुलो बलेन तर राजनीति त चल्यो।
उद्योगधन्दा व्यवसाय, कल–कारखाना, सबै धरासायी छ । सरकार देश प्रगती तिर बढिरहेको बताइरहदा त्रिभुवन विमानस्थल तिर हेर्नुपर्छ देशका होनहार युवाहरु २-४ पैसा कमाउन अरबको खाडी तिर हानिनेको लाइन नै देखिन्छ। प्रगती गरेको देशका युवा, काखे छोराछोरी, वृद्ध बा आमा र प्राण झै प्यारा जीवन साथीलाई छोडेर जान्छन् होला र ? पक्कै जादैनन्।सरकारले तोकेको मजदुरको न्युनतम पारीश्रमिक १३ हजार ५ सय । १३ हजार ५ सयमा के खाने ? के लाउने ? के पढ्ने ? सरकारले दिएको घर, गाडी, पेट्रोल, रासन पानी लिएको कुन मान्छे मेरो अगाडि आएर आँखामा आँखा जुधाएरु भन्न सक्छ कि जनताको ट्याक्स को पैसाले खानदेखि खाएको फाल्नसम्म फ्रीमा पाउनेले १३ हजार ५ सयमा महिना कटाउन सक्छ ? आँफू सरकारी सुविधामा फ्रीमा बस्ने, जनतालाई श्रमिकलाई खान, बस्न, बालबचेरा पढाउन, बिरामी हुँदा ओखती मुलो गर्न, १३ हजार ५ सय ? मेरो चुनौती यो देशको कुनै पनि नेतालाई, १३ हजार ५ सयमा यो देशमा बाँचेर देखाउनुस् । आँफूले गर्न नसक्ने कुरा अर्कालाई गर भन्न सकिदैन ।
न देशको मुहार पनि फेरिएको छ न जनताको नै । खेतबारी सबै बाँझो हुदै छ , होनहार नेपाली जवानहरु विदेश भासिदै छन् , भाषा संस्कृती सबै मासिदैछन् । सियोदेखि जहाजसम्म विदेशबाट आयात हुने देशमा होनहार युवा जति विदेश निर्यात गरेर कसरि हुन्छ बिकास ? एउटा कुरा प्रष्ट छ कि भ्रष्टहरु खुलेआम हिड्ने एउटा पनि देशले प्रगती गरेको छैन ।
संसद बैठकमै यसरी रोए सांसद गजेन्द्र बहादुर महत (भिडियोसहित)
अशोकले हसाए दर्शकलाई ! अशोक दर्जिको गीतमा झुमे नाचे दर्शक
अशोकको घरलाई टंकले महँगो सामानले यसरि सजाइदिए ! यस्तो देखियो भित्र
Previous Article दुर्गा बञ्जाडे बनिन् जुम्लाको पहिलो महिला सीडीओ
Next Article पशुपति शर्माको व्यंग्य गीत ‘ हाम्रा नेतालाइ कुरी कुरी ‘ भाइरल बन्दै ( भिडियो सहित )